Saamiga dahabiga ah wuxuu ku siinayaa go-u-dejinta naqshadda 'Tesla Pickup | Abuurista khadka tooska ah
Xitaa "Saamiga Dahabka" ama Saamiga Dahabiga ahi ma awoodo inuu badbaadiyo naqshadda soo qaadista Tesla
Uguyaraan kuwa badan mana badbaadin karto naqshad qaadista Tesla taasi waxay ka yaabisay asxaabta iyo shisheeyaha. Laakiin qof kastaa ma xanaaqsanayn, sida muuqaalka naqshadda gaadhigu isbeddelay oo hubaal soo saare kale ayaa raaci doona.
Gaar ahaan haddii 200.000 oo boos celis ah ay dhab noqdaan oo in ka badan 800km Waxay u oggolaan doontaa milkiilayaasheeda inay u guuraan meeshii ay doonaan sida ay ugu dhaqmaan kuwa shidaalka ku shaqeeya ee shidaalka ku jira. Waana in saamiga dahabiga ah lagu dabaqay 'Tesla Pickup' si loo xaqiijiyo inay la socoto mabaadi'da guud ee naqshadeynta.
Waan wada hadalnay si ballaadhan maalintiisa Dahabka ah, laakiin waa saami xisaabeed caadi ah oo qeexaya xiriirka isku dheelitiran ee u dhexeeya labada saami ahaan. Waana halkaan halka laga soo qaado Tesla midka loo oggolaaday inuu ku fududaadoUguyaraan Musk, madaxa shirkada gawaarida korontada.
Naqshaddaas khadadka iyo saddexagal miisaan leh Kaas oo qaadanaya masraxa dhexe marka laga eego dhinaca dhinaca, waxaa bartilmaameed u noqday cambaareyn iyo is afgaranwaa badan oo adduunka ah. Runtuna waxay tahay in naqshaddan Tesla ay jebisay wax kasta oo aan ka ogaannay isla kuwii ay bilaabeen iyo inay u eg yihiin gawaadhida caadiga ah ee aan dhaafin fikradaha la aaminsan yahay.
Qaadashada Tesla waxay noqon doontaa kahor iyo kadibba warshadaha baabuurta, oo kaliya maahan naqshadeynta, laakiin sababta oo ah waxay gaaraysaa in ka badan 800km oo ismaamul ah taasina waxay ka dhigeysaa gaari aad u badan oo ay dad badani doonayaan. Maaddaama oo hadda la haysto gawaari aan ka badnayn 300-400 waa dhibaato. Hayso qaboojiye, kululayn ama dhaadhacyadaas oo kuxiran wadada aan marayno; Haddayna taraafiko badani jiraan oo ma joojinnaa? maxaan qabanaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Xitaa "Saamiga Dahabka" ama Saamiga Dahabiga ahi ma awoodo inuu badbaadiyo naqshadda soo qaadista Tesla